Tifitra tao an-damosina :: Kaporaly enjehin’ny Fitsarana noho ny famonoana olona • AoRaha
Tifitra tao an-damosina Kaporaly enjehin’ny Fitsarana noho ny famonoana olona
Nanokafan’ny mpitandro filaminana fanadihadiana ny tranga fitifirana, izay nahafaty lehilahy ka mahavoatonona ny kaporaly iray tany Mahabo-Amboasary Atsimo, afak’omaly. Nanome toromarika amin’ny fanokafana famotorana ny Fitsarana any an-toerana na dia tsy nametraka fitoriana aza ny havan’ilay lehilahy maty satria nanao raharaham-pihavanana tamin’ny lehiben’itsy miaramila voarohirohy itsy ireo tompo-manjo.
Fahitana balana basim-borona no niaingan’ny vono olona. “Lehilahy iray nahita balana basimborona teo akaikin’ny tranony, tany Mahabo, no nampiseho izany tamin’ny namany, afak’omaly maraina. Teo am-piresahana izy roa lahy no nandalo ny miaramila roa avy ao amin’ny Rezimanta voalohany ao amin’ny faritany miaramila fahadimy, any Toliara. Nanadihady momba an’io bala io ny iray tamin’ireo miaramila. Ny namany kosa nisambotra an’ ilay lehilahy faharoa sady nitarika azy hiaraka amin’izy ireo”, araka ny fampitam-baovao avy any Amboasary Atsimo.
Taorian’izay no nitranga ny tsy nampoizina rehefa nilaza ny haka ny entany tao amin’ny trano iray tsy lavitra teo io lehilahy faharoa io. “Voatifitra avy aoriana izy. Loakan’ny bala ny lamosiny. Tsy avotra ny ainy na dia nentina tany amin’ny toeram-pitsaboana fototra faharoa tao an-toerana aza”, hoy ny fanampim-panazavan’ny mpitandro filaminana mandray an-tanana an’ ity raharaha ity.
Arahina ny tohin’ny famotorana an’izao raharaha izao, araka ny toromarika avy amin’ny Fitsarana, any Ambosary Atsimo. Araka ny efa nohamafisin’ny jeneraly Rabenaivoarivelo Jean Claude, lehiben’ny Etamazaoron’ ny tafika dia: “tsy maintsy misy famotorana ampanaoviny amin’ ireny tranga maha voatonontonona miaramila ireny”.
Voina tao anaty hamehana :: Namono mpandeha an-tongotra enina ambin’ny folo ireo loza teto Iarivo